မှော်ဝင်ဘရာဇီးလ်ဂန္ထဝင်ကြီးကို မျက်နှာပွင့်စေရလောက်တဲ့အထိ ကမ္ဘာကျော်အချင်းချင်း ဘယ်လိုတွေချီးကျူးထားခဲ့ကြသလဲ? – Sports A2Z
Article • Other • Other Leagues
မှော်ဝင်ဘရာဇီးလ်ဂန္ထဝင်ကြီးကို မျက်နှာပွင့်စေရလောက်တဲ့အထိ ကမ္ဘာကျော်အချင်းချင်း ဘယ်လိုတွေချီးကျူးထားခဲ့ကြသလဲ?
ဘာစီလိုနာမှာ အခမ်းနားဆုံးနဲ့ အတောက်ပဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဘရာဇီးလ်ဂန္ထဝင် ဘလွန်ဒေါဆုရှင်ကြီး ရော်နယ်ဒင်ညိုလို့ဆိုလိုက်ရင် လီယွန်နယ် မက်ဆီ၊ ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်လ်ဒိုတို့ထက်ကို ကျော်လွန်ပြီး သီးသန့်အကြိုက်ဆုံးနဲ့ အချစ်ဆုံးကစားသမားအဖြစ် ဘောလုံးဝါသနာအိုးတိုင်းရဲ့ ရင်ထဲမှာ သံမှိုစွဲနေခဲ့တာပါ။ ဖျော်ဖြေမှုအပေးနိုင်ဆုံး မှော်ခြေထောက်ပိုင်ရှင်ကြီးလို့လည်း သတ်မှတ်ခံထားရတာပါ။
ပေါ့ပါးပြီး ဘောလုံးဥာဏ်ကြီးရှင်ဆန်လှတဲ့ ကစားဟန်ကို ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့ ဘောလုံးကွင်းထဲမှာ အပြုံးလေးနဲ့ တင်ဆက်နေတဲ့ သူ့ရဲ့ မူလလက်ဟောင်း အမူအရာလေးကို ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘာစီလိုနာဂန္ထဝင်အသင်းနဲ့ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ဂန္ထဝင်အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဥ်မှာ တကျော့ပြန်မြင်တွေ့ရခဲ့ပြီး မှော်ဝင်နေဆဲ ဘရာဇီးလ်ဂန္ထဝင်ကြီးကို သူအနားမယူခင်က မျက်နှာပွင့်စေရလောက်တဲ့အထိ ကမ္ဘာကျော်အချင်းချင်း ဘယ်လိုတွေချီးကျူးထားခဲ့ကြသလဲဆိုတာ တင်ဆက်ပေးပါရစေ။
” ရော်နယ်လ်ဒင်ညိုဆိုတာ တကယ့်အဆင့်မြင့်ကစားသမားပဲ။ သိပ်ကိုကြီးမြတ်သူပါ။ လျင်မြန်တယ်။ အားပြင်းတယ်။ သာမန်လူတွေ လိုက်မမီနိုင်တဲ့ ထူးခြားတဲ့ အရည်အသွေးတွေရှိနေတယ်။ ဘောလုံးလိမ်ခေါက်တဲ့နေရာမှာ သူမတူအောင် စွမ်းရည်မြင့်တယ်။ သူက နံပါတ် ၁၀ နေရာစစ်စစ်လည်း မဟုတ်ဘူး။ အသင်းဖော်တွေ ကစားကွက်သာအောင် ဖန်တီးပေးနေသူသာဖြစ်တယ်။ ဂိုးသွင်းကောင်းတယ်။ အမြင်စူးရှတယ်” ဇီဒန်း
” ရော်နယ်ဒင်ညိုကို ဘယ်သူနဲ့မှ နှိုင်းယှဥ်လို့ မရပါဘူး။ ဘယ်သူမှလည်း လိုက်မမီတဲ့သူပါ။ ကျွန်တော် သူ့ရဲ့အလိမ်အခေါက်တွေနဲ့ ကစားပုံကို သတိတရ မှတ်မိနေပါတယ်။ နူးကမ့်မှာ သူဟာ ဆုဖလားတိုင်းကို ဗိုလ်စွဲခဲ့တာကိုလည်း ပြန်လည်မြင်ယောင်နေပါတယ်” နေမာ
” ကျွန်တော်က ရော်နယ်လ်ဒင်ညိုနဲ့ ရော်ဘင်ညိုတို့ဆီက များစွာသင်ယူခဲ့ရပါတယ်။ နည်းဗျူဟာတွေနဲ့ သေလုမတတ် တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ ကစားပွဲထဲမှာ သူတို့က အပြုံးလေးနဲ့သာ ကစားသွားတာဗျာ။ ဘယ်လောက်ဂေါ်လိုက်လဲ။ သူတို့ရဲ့ ဗွီဒီယိုတွေကို You Tube မှာ နာရီပေါင်းများစွာ ကြည့်ရှုဖြစ်ပါတယ် အီဒင် ဟာဇက်
“သူက တိုက်စစ်မှူးနေရာ ကစားသည်ဖြစ်စေ၊ ကစားကွက်ဖန်တီးရှင်နေရာမှာ ကစားသည်ဖြစ်စေ သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံကိုသာ ရရှိနေရင် ဘယ်သူမှ ထိန်းလို့ မနိုင်တော့ပါဘူး။ အကုန်ပက်လက်လန်ကုန်ကြတာပါပဲ” ရာမို့စ်
“သူ့ခြေစွမ်းက သိပ်ကိုပြောင်မြောက်လွန်းပါတယ်။ သူနဲ့တွေ့ရင် ပြိုင်ဘက်တိုင်းက ကလေးသာသာဖြစ်ကုန်ကြတာပါ” ဇလာတန် အီဘရာဟီမိုဗစ်ချ်
” ဘာဆာရဲ့ ပြောင်းလဲမှုအရွေ့မှာ ရော်နယ်ဒင်ညိုကို မဖြစ်မနေထည့်ပြောရမှာပါ။ အသင်းကို သူစရောက်တဲ့နှစ်မှာ ဖလားမရခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ပရိသတ်တွေက သူ့ကို သိပ်ချစ်သွားကြတယ်။ ဒီနောက်မှာတော့ ဖလားတွေ တလုံးပြီးတလုံး နူးကမ့်ကွင်းထဲ ရောက်လာတော့တာပါပဲ။ လူတွေအကုန်လုံး ပျော်လို့ရွှင်လို့ပေါ့။ ဒီအရာတွေအတွက် ဘာစီလိုနာအသင်းက သူ့ကို အမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်နေရမှာပါ” လီယွန်နယ် မက်ဆီ
ဘာစီလိုနာမွာ အခမ္းနားဆုံးနဲ႔ အေတာက္ပဆုံးျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဘရာဇီးလ္ဂႏၴဝင္ ဘလြန္ေဒါဆုရွင္ႀကီး ေရာ္နယ္ဒင္ညိဳလို႔ဆိုလိုက္ရင္ လီယြန္နယ္ မက္ဆီ၊ ခရစၥတီယာႏို ေရာ္နယ္လ္ဒိုတို႔ထက္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး သီးသန္႔အႀကိဳက္ဆုံးနဲ႔ အခ်စ္ဆုံးကစားသမားအျဖစ္ ေဘာလုံးဝါသနာအိုးတိုင္းရဲ႕ ရင္ထဲမွာ သံမႈိစြဲေနခဲ့တာပါ။ ေဖ်ာ္ေျဖမႈအေပးႏိုင္ဆုံး ေမွာ္ေျခေထာက္ပိုင္ရွင္ႀကီးလို႔လည္း သတ္မွတ္ခံထားရတာပါ။
ေပါ့ပါးၿပီး ေဘာလုံးဥာဏ္ႀကီးရွင္ဆန္လွတဲ့ ကစားဟန္ကို ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္တဲ့ ေဘာလုံးကြင္းထဲမွာ အၿပဳံးေလးနဲ႔ တင္ဆက္ေနတဲ့ သူ႔ရဲ႕ မူလလက္ေဟာင္း အမူအရာေလးကို ပရိသတ္ေတြအေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဘာစီလိုနာဂႏၴဝင္အသင္းနဲ႔ ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္ဂႏၴဝင္အသင္းတို႔ရဲ႕ပြဲစဥ္မွာ တေက်ာ့ျပန္ျမင္ေတြ႕ရခဲ့ၿပီး ေမွာ္ဝင္ေနဆဲ ဘရာဇီးလ္ဂႏၴဝင္ႀကီးကို သူအနားမယူခင္က မ်က္ႏွာပြင့္ေစရေလာက္တဲ့အထိ ကမာၻေက်ာ္အခ်င္းခ်င္း ဘယ္လိုေတြခ်ီးက်ဴးထားခဲ့ၾကသလဲဆိုတာ တင္ဆက္ေပးပါရေစ။
” ေရာ္နယ္လ္ဒင္ညိဳဆိုတာ တကယ့္အဆင့္ျမင့္ကစားသမားပဲ။ သိပ္ကိုႀကီးျမတ္သူပါ။ လ်င္ျမန္တယ္။ အားျပင္းတယ္။ သာမန္လူေတြ လိုက္မမီႏိုင္တဲ့ ထူးျခားတဲ့ အရည္အေသြးေတြရွိေနတယ္။ ေဘာလုံးလိမ္ေခါက္တဲ့ေနရာမွာ သူမတူေအာင္ စြမ္းရည္ျမင့္တယ္။ သူက နံပါတ္ ၁၀ ေနရာစစ္စစ္လည္း မဟုတ္ဘူး။ အသင္းေဖာ္ေတြ ကစားကြက္သာေအာင္ ဖန္တီးေပးေနသူသာျဖစ္တယ္။ ဂိုးသြင္းေကာင္းတယ္။ အျမင္စူးရွတယ္” ဇီဒန္း
” ေရာ္နယ္ဒင္ညိဳကို ဘယ္သူနဲ႔မွ ႏႈိင္းယွဥ္လို႔ မရပါဘူး။ ဘယ္သူမွလည္း လိုက္မမီတဲ့သူပါ။ ကြၽန္ေတာ္ သူ႔ရဲ႕အလိမ္အေခါက္ေတြနဲ႔ ကစားပုံကို သတိတရ မွတ္မိေနပါတယ္။ ႏူးကမ့္မွာ သူဟာ ဆုဖလားတိုင္းကို ဗိုလ္စြဲခဲ့တာကိုလည္း ျပန္လည္ျမင္ေယာင္ေနပါတယ္” ေနမာ
” ကြၽန္ေတာ္က ေရာ္နယ္လ္ဒင္ညိဳနဲ႔ ေရာ္ဘင္ညိဳတို႔ဆီက မ်ားစြာသင္ယူခဲ့ရပါတယ္။ နည္းဗ်ဴဟာေတြနဲ႔ ေသလုမတတ္ တိုက္ပြဲဝင္ေနတဲ့ ကစားပြဲထဲမွာ သူတို႔က အၿပဳံးေလးနဲ႔သာ ကစားသြားတာဗ်ာ။ ဘယ္ေလာက္ေဂၚလိုက္လဲ။ သူတို႔ရဲ႕ ဗြီဒီယိုေတြကို You Tube မွာ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ၾကည့္ရႈျဖစ္ပါတယ္ အီဒင္ ဟာဇက္
“သူက တိုက္စစ္မႉးေနရာ ကစားသည္ျဖစ္ေစ၊ ကစားကြက္ဖန္တီးရွင္ေနရာမွာ ကစားသည္ျဖစ္ေစ သူ႔ရဲ႕အေကာင္းဆုံးပုံစံကိုသာ ရရွိေနရင္ ဘယ္သူမွ ထိန္းလို႔ မႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ အကုန္ပက္လက္လန္ကုန္ၾကတာပါပဲ” ရာမို႔စ္
“သူ႔ေျခစြမ္းက သိပ္ကိုေျပာင္ေျမာက္လြန္းပါတယ္။ သူနဲ႔ေတြ႕ရင္ ၿပိဳင္ဘက္တိုင္းက ကေလးသာသာျဖစ္ကုန္ၾကတာပါ” ဇလာတန္ အီဘရာဟီမိုဗစ္ခ်္
” ဘာဆာရဲ႕ ေျပာင္းလဲမႈအေ႐ြ႕မွာ ေရာ္နယ္ဒင္ညိဳကို မျဖစ္မေနထည့္ေျပာရမွာပါ။ အသင္းကို သူစေရာက္တဲ့ႏွစ္မွာ ဖလားမရခဲ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ပရိသတ္ေတြက သူ႔ကို သိပ္ခ်စ္သြားၾကတယ္။ ဒီေနာက္မွာေတာ့ ဖလားေတြ တလုံးၿပီးတလုံး ႏူးကမ့္ကြင္းထဲ ေရာက္လာေတာ့တာပါပဲ။ လူေတြအကုန္လုံး ေပ်ာ္လို႔႐ႊင္လို႔ေပါ့။ ဒီအရာေတြအတြက္ ဘာစီလိုနာအသင္းက သူ႔ကို အၿမဲတမ္းေက်းဇူးတင္ေနရမွာပါ” လီယြန္နယ္ မက္ဆီ
25 Jul နောက်ဆုံးရ မန်စီးတီး အပြောင်းအရွှေ့သတင်းများ စုစည်းမှု
အမြင့်ဆုံးခြေစွမ်းနဲ့ရွှေဖလားရှင် အွန်နရီရဲ့အကွက်တွေက ပြိုင်ဘက်တွေကို ဘယ်လိုဖြိုခဲ့တာလဲ
လက်ရှိဘောလုံးလောကရဲ့ တိုက်စစ်အားအသန်ဆုံး နည်းပြ ၅ ဦး
Analysis • Article
၂၀၂၁ စက်တင်ဘာ ဘယ်လွန်ဒေါ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာ...
Article • La Liga • Ligue1
မက်ဆီနဲ့ ပိုချက်တီနိုတို့ ပြဿနာစတော့မှာလားနဲ့ အတိတ်က...
၂၀၁၉ ချန်ပီယံလိဂ်ဆီမီးဖိုင်နယ်ရောက် အိုင်းယက်စ်ရဲ့...